क्षितिज उघार्दे स्थानीय तह - Karobar National Economic Daily
क्षितिज उघार्दे स्थानीय तह
query_builderApril 13, 2017 10:12 AM supervisor_accountभगवान खनाल visibility413
शायद कमैले सोचेको थिए, स्थानीय सरकारको रुपमा स्थानीय तह आउँला भन्ने । जनताको त के कुरा, नेताले समेत स्थानीय सरकार बन्ला भन्ने सपना समेत देखेका थिएनन् । तर, संविधानले यसलाई सावित गरिदियो ।
हुन त नेपालमा विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनको उपलब्धिको रुपमा शिशु संघीयतालाई लिने गरिन्छ । यसकै फलस्वरुप भएको संविधान सभा र अर्को (हालको) संविधान सभाबाट बनेको संविधानले स्थानीय तहसहित संघीय व्यवस्थाको पर्दा उखारेको हो ।
स्थानीय तह घोषणा र कार्यान्वयनको दिशासँगै स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीले संविधान कार्यान्वयनको वातावरण बन्दै गएको छ । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुट्किलोको रुपमा रहेको स्थानीय तह निर्वाचनले ०७४ सालमा जनउभार ल्याउने निश्चितप्राय देखिन्छ ।
निकै आशा र संशयले हेरिएको छ, स्थानीय तहलाई । एकातिर स्थानीय तहले पाएको अधिकार र अर्कोतिर लगभग डेढदशक लामो स्थानीय स्तरको जनप्रतिनिधित्वविहीनतालाई अन्त्य गर्न घोषित स्थानीय तह निर्वाचन पछि नेपालको राजनीतिक–प्रशासनिक–आर्थिक क्षेत्रको क्षीतिज उखारिने विश्वास सबैले लिएका छन् ।
संघीयता सम्बन्धि विज्ञहरू तल्लो तहमा अधिकारको निक्षेपणलाई उल्लेख्य उपलब्धि मान्दछन् ।
संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुट्किलो
नजिकिँदो स्थानीय निर्वाचन र स्थानीय सरकारको व्यवस्थापन
यद्यपि यसको कार्यान्वयनका जटिलता नकार्न सकिन्न । एउटा व्यवस्था र अवस्थाबाट अर्कोमा रुपान्तरण हुँदा स्वाभाविकै रुपमा केही चुनौतिहरू रहन्छन् । यो चुनौति स्थानीय तहको कार्यान्वयन पनि निश्चय नै देखा पर्ने संभावना भएपनि यसलाई ७४४ वटा सरकारले पक्कै पनि अवसरको रुपमा सदुपयोग गरी मुलुकको समृद्धिको क्षीतिज उखारिने छ, ०७४ सालमा ।
खासगरी स्थानीय सरकारको बजेटको वनावट, संकलन र जनतालाई प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा र ती सरकारले बनाउने स्थानीय योजना, नीति र त्यसको कार्यान्वयन ०७४ सालमा क्रमशः अघि बढ्ने नै छ । ती सरकारले आर्थिक सुशासन, जवाफदेयिता, पारदर्शिता र दायित्ववहन ठीक ढंगले गरेमा स्थानीय तहमा अधिकारको निक्षेपणसहित विकासले गति लिने धेरैको अपेक्षा छ ।
लगभग दुई शताब्दी बढी लामो केन्द्रीयतालाई तोड्दै विकेन्द्रीकरण गरेपनि बजेटको सन्दर्भलाई लिएर केही वर्ष अझै पनि केन्द्रकै मुख नै ताक्नु पर्ने स्थिति आउन सक्ने संभावना छ । किनकी सबै स्थानीय तहको आर्थिक स्रोत उत्तिकै बलियो छैन । उता, संविधानले काम चाहिँ स्थानीय तहमा प्रदान गरेपनि मुख्य राजश्वको स्रोत भने केन्द्र सरकारमा नै राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया ८० प्रतिशतभन्दा माथि वित्तीय अधिकार केन्द्रमा रहेको बताउँछन् । यसैगरी संघीयता सम्बन्धि विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा पनि ८० प्रतिशत भन्दा माथि वित्तीय अधिकार केन्द्रमा नै रहेको बताउँछन् ।
यसबाट के देखिन्छ भने आर्थिक स्रोतको प्रवाह गर्न संविधानमा केही संकुचनता रहेको देखिन्छ । यद्यपि स्थानीय तहलाई विशेष खालको बजेट प्रदान गरिने बताइँदै आइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्थानीय तह(संघीयता कार्यान्वयन) केन्द्रित भएर ल्याउने प्रयास सरकारले गरेको छ । सानो कामको लागि पनि केन्द्र धाउनु पर्ने वाध्यताको अन्त्य निर्वाचनको पछिको स्थानीय सरकारले ल्याउने बजेट, नीति तथा कार्यक्रमले अवश्य नै ०७४ सालले पुष्टि गर्ने छ ।
उता भर्खरै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको स्थानीय तह शासन सञ्चालन सम्बन्धि नयाँ ऐन पनि विशिष्टकृत नभएको आरोप केही सरकारी अधिकारीहरूले लगाएका छन् । ऐनको प्रावधान सैद्धान्तिक बढी र कार्यपरकता कम भएको आरोप लगाउँछन् ।
हाल संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बनाएको आदेशको रुपमा स्थानीय तह सञ्चालनमा आएका हुन् । यसैले स्थानीय तह बनेका भएपनि कामचलाऊ मात्रै हुन् । निर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि मात्रै फूल फ्लेजमा काम हुने भएपनि स्थानीय तहको संस्थागत विकास हुन केही वर्ष लाग्नेछ ।
स्थानीय तहको अधिकारलाई सुनिश्चित गराउने दिशामा लाग्नु पर्ने अवस्था छ । डा. देवकोटा भन्छन्, “स्थानीय तहका अधिकारलाई भोलिको राजनीतिक परिदृश्यमा झनै सुनिश्चित गराउनु पर्ने हुन्छ ।” गाउँ÷नगरहरू योजनाविहीन अवस्थामा रहेकोले ०७४ सालमा स्थानीय सरकारका योजना बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
०७४ सालमा प्रदेशको निर्वाचन र सरकारको गठन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । यस्तै, केन्द्रीय सरकार पनि बनाउनु पर्ने संविधान अनुसारको डेडलाइन रहेकोले पनि स्थानीय तह निर्वाचन भई स्थानीय तहको राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्थापन गरी समृद्धिको दिशामा लम्कनको लागि ०७४ साल प्रस्थान बिन्दुको रुपमा रहने निश्चितप्राय नै देखिन्छ । स्थानीय तह जननिर्वाचित प्रतिनिधि, नागरिक र कर्मचारीका साथमा साथ र हातमा हात मिलाउँदै अघि बढ्ने छ ।
पहिला केन्द्रले गर्ने कार्य संविधानले स्थानीय तहमा प्रदान गरेकोले स्थानीय तह सबल, सक्षम रहनु पर्छ । तर यसको लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिने स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका पूर्वसदस्य डा. श्यामकृष्ण भूर्तेल बताउँछन् । सेवा प्रवाह स्थानीय तहमा भएपछि नागरिकको पहुँच अवश्य न बढ्छ । उनीहरू उत्तरदायी हुन्छन् । अन्तर सरकारी समन्वय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण चाहिन्छ ।
स्थानीय तहले नयाँ आयाम बढाउने डा. भूर्तेल बताउँछन् । संविधान अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले पाएका अधिकारअनुसार सरकारले तत्कालै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनाएर अघि बढन्ु पर्ने उनले बताए ।
नागरिक अपेक्षा धेरै छन् । तत्काल स्थानीय तहले पूर्ण सामथ्र्य र क्षमताका साथ काम गर्न नसकेपनि यसको व्यवस्थापन क्रमिक रुपले गर्दै जानुपर्छ ।
स्थानीय तह स्थानीय सरकार क्षितिज उघार्दे स्थानीय तह